Qisso yaableh oo na dhex martay Madaxwayne Muuse Biixi Cabdi 10 sano ka hor.W/Q: Khadar Ibrahim Aar. | Baligubadlemedia.com
Waxaa kaloo jira oo iyana wakhtigan xadirka ah tiro-beeshay dadka iyagu Madaxwaynaha amaan xad-dhaafa usoo jeedinaaya calashaan waa qabiilkayaga,sidoo kalana kuwo kale ayaa sabab la’aan foolxumo iyo fadeexad aanu lahayn dusha ka saaraaya,balse anigu waxaan ku tala jiraa Ilahayna igu og yahay in aan Madaxwayne Muuse Biixi wixii aan kala kulmay ama si gaar ah noo dhexmaray in aan dhayda ka cadeeyo.
Isla fadhigaasi u horeeya Muuse Xafiiska ma joogo,balse odayashii isaga ka socday iyo kuwii Gaadhiga laga iibsanayey ayaa heshiiskii sii dhamaystiray,kadibna waxa la gaadhay xiligii ay labada xaqle Ibiyaha iyo Iibsaduhu ay warqada saxeexi lahayeen,waana mid sharci ah la’aantoodna wax suura galayaa ma jiro.
Iibiyahii isagu waa uu joogaa waana xaadir, balse waxa maqan Mujaahidkii,markiiba Telafoonka Gacanta ayaa lagala hadlay””Mujaahid adiga ayuunbaa lagu sugayaa soo carar ayaa lagu yidhi,kuyee- haye waan idilla jooga “”Ilbidhiqsiyo waxaan ku qiyaasay Albaabkaabu soo garaacay,malahayga waxaaban is idhi Albaabka ayaabu taagnaa markii lala hadlaayey,Askari uun iga dheh!
Muuse Biixi anigaygan hada qoraalka idinla wadaagaaya ayaa waxa aan waydiiyey Su’aalahii aan markaasi uga bahnaa si aan u dhamaystiro heshiiskii qabyada ahaa ,jawaabahii igalamuu daahin hore ayaanu uga soconay ,qoraalkii si wada jira ayaanu u akhrinay,dhankiisa waxa aad moodaa Muuse oo iminka Madaxwayne ahi in uu si xeel-dheer ugu dhag-raaricinaayey heshiiska iyo qodobada uu ka kooban yahay,hasa yeeshee maxaa dhacay markii danbe!
Dadkii dhamaan kuraastii ayay ka kaceen,way wada sarajoogsadeen midkastaaba aniga ayuu ila hadlay buuq iyo qaylo ayaa xafiiskii ka furmay *Daahirow is-dhagayso ayaa ka dhacday*arintu waxa ay ku sigatay in heshiiskiiba uu burburo, dhamaantood marka Muuse Biixi laga reebo waxa ay aniga dadku ileeyhiin hadalkan””WAXAAD DHINTAA IIBKA LACAGTA WAX LA KALA SIISTAY SI AY CANSHUURTU U YARAATO””balse wakhtiyar ka bacdi maxaa dhacay!!
“”Waar bal fadhiista,ma waxa aad ka qaylinaysaan Lacagta Canshuurta ah ee dawlada loo xaraynaayo ee waliba idinka Mushahaarka la idiin siinaayo!! Annagu (Muuse ahaan) marna dadwaynaha u noqon maayo madax marna canshuurtooda dafiri mayno,**Wallaahi ayaan ku dhaartee hadii ay Kumaankun doolar noqonayso waanu bixinaynaa,adigana(inta uu farta igu soo fiiqay) waxa aanu kaa rabnaa Jiwan xalaal ah oo ay ku qoran tahay lacagtii aad naga qaaday”!
Intaasi wixii ka danbeeyey waa halkii Somalidee Laba-cali’kumay wada hadal.
Waxaa laga yabaa in qoralkaygan dadka qaar u fasirtaan tageradii iyo borobogaandadii wayadii dhawayd suuqyada ka socotay Somaliland ,amaba ay qaarkood igu suureeyaan sida inoo caadada ah waxa loo yaqaano “Jeegaanta” kadibna ay ujeedadayda ula kacaan Cir iyo cadadii “”waar maa a’hi waa halkii Cali Khaliif Galaydhe”” dhanka kale iga eega hadaad doontaan in aad i akhridaan ,waa halkii Xirsiye bal Giraantaba ,nabadeey.